Indlu ethandekayo kwi-Indre Nørrebro - I-Airbnb
Indlu ethandekayo kwi-Indre Nørrebro
ECopenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJacob
Isanda kulungiswa igumbi lokulala eli-3 elinebalcony kweyona ndawo ibalaseleyo yesixeko: Indre Nørrebro. Ifumaneka kwiRavnsborggade phakathi kweSankt Hans Torv kunye neSøerne. Imizuzu eyi-10 ukuhamba ukusuka eNørreport, kunye nokufikelela kwiMetro, oololiwe be-S, oololiwe boMmandla kunye neebhasi.
Indlu esandula ukulungiswa kweyona ndawo ibalaseleyo yedolophu: Indre Nørrebro. Ifumaneka kwiRavnsborggade phakathi kweSankt Hans Torv kunye neSøerne. Imizuzu eyi-10 ukuhamba ukusuka eNørreport, kunye nokufikelela kwiMetro, oololiwe be-S, oololiwe boMmandla kunye neebhasi.
Indlu iyi-65 m2, inegumbi lokulala, ikhitshi / igumbi lokuhlala elikhulu kwelinye, igumbi labantwana, igumbi lokuhlambela, ipaseji kunye nebalcony entle enelanga.Yonke into isandula ukulungiswa kwaye isebenza kakuhle kakhulu.
Kukho i-intanethi ye-Wi-Fi kunye ne-Apple TV kumagumbi ama-2.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Copenhagen